डोकोनाङ्लो डटकम -
निगाले गाउँका धेरैजसो सहर पसेकाले उनको डोकोनाङ्लो, थुञ्चे बिक्न छाडे । उनले जानेको सीप डोकोनाङ्लो बुन्ने नै हो । यही बेचेर परिवारलाई खान लाउन पु¥याउँथे । कक्षा ९ पुगेका छेडुपको स्कुल खर्च पनि पुग्थ्यो ।
‘अनि तेरा कम्प्युटरमा यत्रा डोको नाङ्लो अट्छन् त ?
‘छेडुप, डोको त १ सय वटा पुगिसकेछ, नाङ्लो पनि २० वटा भएछ, तिम्रो स्कुलको फिस नतिरेको पनि धेरै भयो,।’ बुन्दै गरेको डोकोमा पानी छ्याप्दै छेवाङले भने,–‘यी डोको बिके त फिस तिरेर पनि पैसा बच्ने थियो, कसरी बिकाउने होला ?’
‘कम्प्युटरमा पसल खोलौ न बुवा, अनि बिकी हाल्छ नि,’ छेडुपले भने ।
‘आम्मम ! पिँढी त डोको र नाङ्लोले भरिएछ त दाई, अझै पनि बुनिरहनुभएको छ,’ मिसले भनिन् ।
‘त्यसै थुप्रेर बसेको छ नि, बिक्ने हैन । यी डोको नाङ्लो कम्प्युटरमा पसल खोलेर बेच्न सकिन्छ भनेर छेडुपले भन्दै थिए, त्यही भएर मिसलाई दुःख दिएको नि,’ छेवाङले मिसतिर हेर्दै भने ।
‘मलाई के को दुःख नि दाई, जानेको कुरा सिकाउने न हो । छेडुपले भनेको कुरा सही हो । अचेल कम्प्युटरबाटै आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्न सकिन्छ दाई,’ मिसले भनिन् ।’
‘अनि यति धेरै डोको नाङ्लो जाबो सानो कम्प्युटर पसलमा अट्छन् होला त मिस ?’ छेवाङले सोधे ।
‘यी सामान कम्प्युटरभित्र राख्नै पर्दैन नि दाई, एउटाको फोटो खिचेर मुल्यसूची राख्ने, तपाईको फोन नम्बर राख्ने, अनि मानिसहरुले अर्डर गरिहाल्छन् नि,’ मिसले हाँस्दै झोलाबाट ल्यापटप निकालिन् ।
छेडुपकी आमा लानीले सबैलाई चौरीको नौनी हालेको नुन चिया ल्याइन् ।
‘मैले यो कम्प्युटर एक शिक्षक एक ल्यापटप कार्यक्रममा लिएकी हुँ, अहिले त सबै पैसा तिरिसकें,’ मिसले भनिन्, ‘यही कम्प्युटरमा इ–पुस्तकालय कार्यक्रम पनि छ, यहीबाट हामी विद्यार्थीलाई सिकाउँछौं । मैले पनि अनलाइन किनबेचबारे यहीबाट धेरै कुरा सिकेकी हुँ ।’
‘हस मिस, तपाईंको गुण भुल्ने छैन, यो कम्प्युटर पढाईले मेरो छोरा पनि अहिले अलि बुझ्ने भएछन्, पहिले सहर जान कर गर्थे, अहिले यतै पढ्ने भन्छन्, डोको यतै बिके त हामीले पनि गाउँ छाड्ने पर्थेन,’ छेवाङले भने ।
‘मेरो ह्यान्डीक्राफ्ट पसल छ, मलाई २ सय जति डोको र १ सय वटा जति नाङ्लो चाहिएको छ ?’ रामप्रतापले सोधे ।
‘सक्दो बुन्नुहोस, म दुई हप्तामा क्यास लिई आएर सबै सामान उठाउँछु, मेरो नम्बर यही हो,’ ठेकेदारले भने ।
‘हस, म तपाईंको नाममा २५ हजार रुपैयाँ अहिले नै हालिदिन्छु, तपाईंलाई नजिक पर्ने मनी ट्रान्सफर कम्पनीबाट लिनुहोला, अहिलेलाई बिदा,’ रामप्रतापले छेवाङलाई विश्वस्त बनाए ।
(कथाकार पत्रकार एवं बाल कथाकार हुन् ।)
तिमी किन सधै कानमा इयरफोन राख्छौ?